> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Motorola taleefanka gacanta
Sidee ayaan u oofin karin soo kabashada sawir Motorola Atrix?
Si qalad ah ayaan dhowr sawiro tirtiray (wada videos qaar ka mid ah) ka Motorola Atrix (TM) 4G phone android. Ma jiraan wax hababka inuu ka soo kabsado iyaga? Warbaahinta Intaasu waa intii laga kaliya dhawr daqiiqadood ka hor laga qaaday oo waxaan u riixriixan oo badhanka delete istareexa. Waxay yihiin kuwo aad u qaali ah, iyo waxay ka dhigan tahay wax badan ii, fadlan i caawi
Suurtogalnimada weyn inuu ka soo kabsado sawiro iyo videos tirtiray ka Motorola telefoonada gacanta Waxaad. Sawiro iyo filimo ka ah kuwa weli ku jira kaadhka xusuusta aad telefoonka, kaliya ma arki karo. Waxa ay sugayeen in la overwritten by sawiro cusub ama videos, ka dibna tageen weligiis.
Hel barnaamijka Motorola taleefanka moobaylka soo kabashada ka hor inta aadan wax kale samayn. Here're qalabka talinayaa: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac , labadaas arrimood oo aad u awood inuu ka soo kabsado photos, video iyo files audio ka Motorola telefoonka gacanta, arrinta ma tahay ay tirtiray, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale. Iyada oo 3 kaliya tallaabooyin, waxaad iyaga ka heli kartaa oo dhan dib eber tayada khasaaro.
Dooro version saxda ah ee computer hoos ku qoran, oo waxay qaadan doonaan isku day ah oo bilaash ah!
Fiiro gaar ah: Fadlan ha isticmaalin telefoonka si sawirro cusub ama videos qaadan hadda ka dib, oo wuxuu oofin Motorola kabashada telefoonka mobile sida ugu dhaqsaha badan.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray, videos ka Motorola telefoonada gacanta
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan Motorola telefoonada gacanta iyo kombiyuutarka. Markaas rakibi oo ay maamulaan Motorola telefoonka mobile qalabka kabashada, oo waxaad heli doontaa suuqa kala hoose soo socda. Guji "Start" in ay sii wadaan.
Step2. Dooro Motorola mobile phone oo ay bilaabaan iskaanka
Dooro warqadda drive in loo xilsaaray in ay telefoonka gacanta oo guji "Scan" si ay u baadhaan files lumay ee aad taleefan.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray photos, videos ka Motorola telefoonka gacanta
Scan ka dib, waxaad yeelan doontaa hore ee liiska oo dhan files warbaahinta recoverable kala saaraa saddex nooc oo file sida audio, video iyo sawir. Waxaad ku eegaan karo iyo fiiri mid mid, oo kulligood wada kabsadaan ka mid ah ugu dambeyntii.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Motorola telefoonka gacanta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada sawir Motorola